Masaajida kuyaala UK oo maanta Albaabada loo furayo iyo Sababta ka dambeysa arintaasi - iftineducation.com
iftineducation.com – In kabadan 80 masaajid oo ku yaalla daafaha UK ayaa maanta albaabadooda u furaya dadka aan muslimiinta ahayn, taas oo qeyb ka ah la dagaallanta aragtida xun ee laga qabo Islaamka, iyo in dadka la baro diinta Islaamka waxa ay tahay.
Taani ayaa ku soo beegmeyso waqti aysan jirin in laga baahiyo televishonada weerar ay koox mintidiin islaami ah ay qaadeen.
Qabanqabayaasha ayaa sheegay, in maalintani ay tahay waddo ay musliminta ku garayaan walalahooda kale ayna ku mujinayaan in diinta islaamka tahay mid nabaad ah.
Muslimiinta dalka Uk ku nool ayaa waxa ay garaayan 3milyaan, iyagoo noqday 100kiiba 5 tiradda dadka ku nool dalkaasi.
Dhamaan masajiddada aya loo furayaa albabada, waxa ayna rajeeynaayan in aay baddalaan fikirka laga aaminsanyahay islaamka manta.
DAAWO VIDEO:Ninkii Wariyaasha dilida Al-shabaab u qaabilsanaa oo sir badan fashilay,inta wariye Al-shabaab dishey+ Xogo badan oo Qarsoon!!!